နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ: 2016
1. Jasmine = စံပယ်ပန်း။
2. Rose = နှင်းဆီပန်း။
3. Star-flower = ခရေပန်း။
4. Orchid = သစ်ခွပန်း။
5. Lotus = ကြာပန်း။
6. Water-lily = ကြာပန်း။
7. Religiosa = အင်ကြင်း။
8. Yellow ginge lily = ရွှေပန်း။
9. White waxy flower = ငွေပန်း။
10. Lily = နှင်းပန်း။
11. Tiger-lady = သဇင်ပန်း။
12. Gladiola = သစ္စာပန်း။
13. Marigold = ထပ်တစ်ရာပန်း။
14. Chrysanthemum = ဂန္ဓမာ။
15. Wormwood = ဒေါနပန်း။
16. Vervain = ဆောင်တော်ကူး။
17. Bridal bouquet = ဆောင်တော်ကူး။
18. Tulip = ခတ္တာပန်း။
19. Gumkino flower = ပိတောက်ပန်း။
20. Eugenia leaves = သပြေရွက်များ။
21. Ixora = ပုဏ္ဏရိတ်ပန်း။
22. Canna = ဗုဒ္ဓံသရဏံ။
23. Golden coreopsis = စိန်ခြယ်ပန်း။
24. Aster =မေမြို့ပန်း။
25. Antigonum/ coralvine = တိုက်ပန်း။
26. Gardenia = ဇီဇ၀ါ။
27. Sunflower = နေကြာပန်း။
28. Cherry = ချယ်ရီပန်း
29. Dahlia = ဒေလီယာပန်း
30. Queen of the night = ညမွှေးပန်း။
31. Gold mohur = စိန်ပန်း။
32.hibiscus = ခေါင်ရမ်း။
33. Shoe flower = ခေါင်ရမ်းပန်း။
34. Laburnum = ငုပန်း။
35. Water-hyacinth = ဗေဒါ။
36. Golden shower = သော်က။
37. Bougainvillaea = စက္ကူပန်း။
38. Frangipani = တရုတ်စကား။
39. Clematis = ခွာညို။
40. Anthurium = ပိန်းပန်း။
41. Croton = ရွက်လှ။
42. Daisy = ဒေစီပန်း။
43. Yellow champac = စကားဝါ။
44. White champak = စကားဖြူ။
45. Arabian jasmine = ကြက်ရုန်း။
46. Slipper orchid = ဂမုန်းသစ်ခွ။
47. Johnquil = ဂမုန်း။
48. Trumpet flower = သခွတ်ပန်း။
49. Golden rod = ခိုင်ရွှေဝါ။
50. Zinnia = ဒေါင်းဖန်ဝါပန်း။
51. Canterbury bell-flower = ခေါင်းလောင်းပန်း။
52. Spanish jasmine = မလေးပန်း။
53. Begonia = ကြွေပန်း။
54. Mesua ferrea = ကံ့ကော်ပန်း။
55. Casssiafistula = ငုဝါပန်း။
56. Small jasmine = ဇွန်ပန်း။
57. Ivy flower = တိုက်ကပ်နွယ်ပန်း။
58. Balsam flower = ဒန်းပန်း။
59. Star ipomea = မြတ်လေးပန်း။
60. Salitetrasperma = မိုးမခပန်း။
61. Vachellia = နန်းလုံးကြိုင်။
62. Rhododendron = တောင်ဇလပ်ပန်း
63. Carnation = ဇော်မွှားပန်း။
64. Oleander = နွယ်သာကီပန်း။
65. Kumudra waterlily = ကုမုဒြာကြာပန်း။
66. Alexandrian laurel = ပုန်းညက်ပန်း။
67. Sandal wood flower = စန္ဒကူးပန်း။
68. Yellow oleander = ဖယောင်းပန်း။
69. Callophillum amoenum= သရဖီ။
သပြေ - Eugenia plant
ခွာညို - Clematis smilacifolia
ကြက်မောက် - Amaranth flower
နွယ်သာကီ - Olender
ဆိတ်ဖလူးပန်း - Night Jasmin ( a) coral jasmine
စွယ်တော်ပန်း -Hong Kong Orchid Tree Flower.
ပင်လုံးကြိုင် - Sweet Osmanthus (a) sweet tea (a) sweet olive
ကုမုဒြာပန်း - Dutchman's pipe Cactus
စကားဝါ - Michelia champaca
တရုတ်စကားပန်း - Plumeria (a) Frangipani
ထားဝယ်မှိုင်း - Rangoon Creeper (a) Quisqualis indica
အင်ကြင်းပန်း - Shorea Robusta flower
ရွှေပန်း ငွေပန်း - White Ginger
ခတ္တာပန်း - Crinum asiaticum (a) Poison Bulb
ပုန်းညက် - Calophyllum inophyllum
ခရေပန်း - Spanish Cherry (a) Star Flower (a) Mimusops elengi
ပုဏ္ဏရိတ်ပန်း - Ixora
ဆပ်သွားဖူးပန်း - Pandanus Flower
ဒေါနပန်း - wormwood plant
Posted by Welcome Asean to Myanmar at 10:29 PM No comments: